fanaaniinta Archives - iftineducation.com
Diyaaradda OCEAN AIRLINES oo Xarumo Waawayn ku leh magaalooyinka Muqdisho, Nairobi, Hargeisa, Boosaaso iyo meelo kalaba ayaa kamid Noqotay Diyaaradaha ka shaqeeya Gobolka Kuwa ugu adeega Fiican, islamarkaana aanu waxba iska badalin Xiliyada ay Bulshadu Safarka isku diyaariyaan, taasi oo horey dadku ay dhibaato ku qabeen, Waxayna Xiliyada Habaynkii kasoo degtaa Garoonka Muqdisho. HALKAN KA DAAWO VIDEO Maryan Mursal Ciise…
filimka Baadshaho maalintiisa kowaad lacagaha uu keenay gudaha Hindiya
aadan21 / September 4, 2017
Super Star Ajay Devgn filimkiisa Baadshaho sidoo kalena ay ku wehliyaan Emraan Hashmi, Ileana D’Cruz iyo Vidyut Jamwal ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay maalintiisa kowaad. Sida shabakada Boxoffice India xaqiijisay Baadshaho maalintiisa kowaad wuxuu keenay 10.25 Crore (Trade Figure) maantana waxaa la filaa in ganacsigiisa sare u kac sameeyo madaama maanta Hindiya ciida carafo looga dabaal dagayo. Baadshaho wuxuu…
Aqbaar Wanaagsan: Filimka Bareilly Ki Barfi Isniintiisa Kowaad Ganacsi Ahaan Wuu Is Celiyay
aadan21 / August 25, 2017
Filimka Bareilly Ki Barfi oo ay wada jilayaan Rajkumar Rao, Ayushmann Khuranna iyo Kriti Sanon ayaa ka gudbay tijaabadii maalinta Isniinta madaama uu sameeyay 15% ilaa 20% marka lala bar bar dhigo Jimcadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay. Filimka Bareilly Ki Barfi wuxuu keenay Isniintiisa kowaad 1.75 Crore (Trade Figure) waana ganacsi fiican taasi oo ka caawin karto inuu darajada Average…
Kareena Kapoor Muuqaal Marti Ah Maku Yeelan Doontaa Golmaal Again?
aadan21 / August 13, 2017
Kareena Kapoor Muuqaal Marti Ah Maku Yeelan Doontaa Golmaal Again? Kareena Kapoor Khan waa atirisho caan ku ah sameynta taxanaha Golmaal ayadoo horey kaga soo muuqatay labo ka mid ah sedexda qeybood ee filimkaan laga sameeyay. Laakiin nasiib daro Bebo qaybta 4-aad Golmaal Again door dhameestiran kuma lahaan doonto madaama shaqada filimkaan kusoo aaday xili ay dhashay Taimur Ali…
Salman Khan Oo Tiger Zinda Hai Abu Dhabi Ku Duubayo Una Mahad Celiyay Taageerayaashiisa
Mega Star Salman Khan ayaa haatan ku duubayo filimkiisa weyn Tiger Zinda Hai magaalada Abu Dhabi waana jadwalka ugu dambeeyo filimkaan. Salman Khan qoraalkan ayuu baraha bulshada soo dhigay wuxuuna yiri “Waxaan ku duubayaa Abu Dhabi Tiger Zinda Hai waa mahad santihii dowlada iyo dhamaan taageerayaasha jaceylka iyo garabka weyn na siiyeen” Jadwalkaan wuxuu qaadan doonaa 40-maalmood waa jadwalka ugu…
Degdeg Daawo Fadeexad Subxaanalah Fanaanada Yurub Geenyo Oo Cabsan Muqaal Qarsoodi Ah Looga Duubay Hotel lagu tunto oo ku yaal
aadan21 / August 10, 2017
Degdeg Daawo Fadeexad Subxaanalah Fanaanada Yurub Geenyo Oo Cabsan Muqaal Qarsoodi Ah Looga Duubay Hotel lagu tunto oo ku yaal maagalada caasimada ah ee muqdisho waxaa saas yeelaayo waa ciyaalka halabay ee reer yurub ka yimid ayagana aqldaro lee waa arin lala yaabay ha daawan hadadan wali qaan gaarin waryaa waa fashil ka dhacaye riix halkaan ka…
kintirka gabdhaha iyo kacsiga
aadan21 / August 4, 2017
Waxaan maanta idiin heynaa barnaamij cusub oo kamid ah barnaamijyadii taxana ahaa ee arimaha bulshada ee iftineducation.com. Maanta qdobkeena wuxuu ku sabsanyahay qaab loo kordhin karo kacsiga si fiicana loogu qancin karo xaaskaaga Hadaba samee amuurahan hoos ku xusan. Soo qaado ama soo diyaarso koob Malab ah iyo koob barkii Basal la ridqay ah, oo isku kari ilaa iyo inta…
wiil cadaan jaceyl daran u qaaday fanaanad soomaaliyeed
aadan21 / August 2, 2017
RAGGOO FADEEXOOBA WAA DUMARKOO FADEEXOOBA!!!
aadan21 / July 19, 2017
Jiifsashadii Muslimiinta ee la tartamida xadaaradaha caalamka sida, curinta afkaaro, aragtiyo ama nadariyaat falsafo ama aydiyoolajiyad, iktishaafida culuumo iyo horumarinta dhaxalkii aadanuhu kala hantiyey, lagu soo bandhigo saylada caalamka. Kadib hurdadii qaadatay wakhtiga dheer iyo ilbaxnimadii ugu weyneyd ee ninka cad unkay, kobciyey islamarkaana suuqa caalamka u soo iib geeyay; waxay la timid natiijo si hufan u qeexaysa kagadaal, guuladaradii…
Arjun Kapoor Iyo Parineeti Chopra Filimkooda Sandeep Aur Pinky Faraar Oo Duubis Lagu Bilaabi Doono October
aadan21 / July 13, 2017
Arjun Kapoor Iyo Parineeti Chopra ayaa dib shaashada ugu midoobaaya 5-sano ka dib ayagoo wada sameyn doonan filimka Sandeep Aur Pinky Faraar. Filimka Sandeep Aur Pinky Faraar waxaa director ka noqan doona Dibakar Banerjee waana filim jaceyl iyo Action isku jiro waana filim xiiso badan oo Arjun Iyo Pari mar kale shaashada isfaham weyn kusoo badhigi doonan. Waxaana la sheegay…